DHAGEYSO:Qarax xoogan oo caawa kadhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta…. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeDHAGAYSO WARARKADHAGEYSO:Qarax xoogan oo caawa kadhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta….
DHAGEYSO:Qarax xoogan oo caawa kadhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta….
October 21, 2018 Abdirahman Al-cadaala DHAGAYSO WARARKA, WARARKA MAANTA Comments Off on DHAGEYSO:Qarax xoogan oo caawa kadhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta….
Rag hubeysan ayaa Caawa weerar bambaano waxa ay ku qaadeen Xarunta Maamulka degmada Boondheere ee Gobolkaan Banaadir,waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro dhaawac ah.
Goobjoogayaal ayaa sheegeen inay maqlayeen jugta weerarka bambaano,kadibna ay maqleen rasaas ay rideen Ciidamo Boolis ah oo ku sugan Xarunta degmada.
Guddoomiyaha laanta koowaad ee Nasiibuundo oo lagu Magacaabo Suuley oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in bamka laga soo tuuray Luuq u dhow MCH halkaasi ku yaalla ee dhinaca Siinay,isla markaana uu ku dhaawacmay mid ka mid ah Ciidamada Booliska ee Xarunta ku sugan.
Wararkii u dambeeyay ee haatan naga soo gaaraya Xarunta degmada ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan,isla markaana Ciidamo Boolis ah ay ku sugan yihiin Xarunta degmada Boondheere.
Wararkii ugu danbeeyay qarax aad u culus oo laga maqlay goobo fog fog oo kadhacay…
Cabdikariin Xuseen Guled Oo Si kulul uga jawaabay Hadal Maanta Kasoo Yeeray Madaxweyna Puntland….
1,333,369 total views, 12,590 views today
1,333,369 total views, 12,590 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
1,333,226 total views, 12,588 views today
1,333,226 total views, 12,588 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
1,333,242 total views, 12,587 views today
1,333,242 total views, 12,587 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
1,333,159 total views, 12,588 views today
1,333,159 total views, 12,588 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
1,333,106 total views, 12,589 views today
1,333,106 total views, 12,589 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]